Taageerayaasha Arsenal Ee Doonaya In Unai Emery Shaqada Laga Caydhiyo Oo Saddex Tababare Soo Xushay Si Ay Badal Ugu Noqdaan Emery. - Gool24.Net
Taageerayaasha Arsenal Ee Doonaya In Unai Emery Shaqada Laga Caydhiyo Oo Saddex Tababare Soo Xushay Si Ay Badal Ugu Noqdaan Emery.
Qayb ka mid ah taageerayaasha kooxda Arsenal ayaa haddaba wada olole ay ku doonayaan in shaqada looga caydhiyo macalinka kooxdooda ee Unai Emery kadib markii ay u arkeen in aanu ahayn tababarihii kooxdooda u qalmay.
Taageerayaashan ayaa soo bandhigay ilaa saddex tababare oo ay doonayaan in ay Unai Emery shaqada ka badalaan, inkasta oo ayna wali muuqan wax saan saan muujinaysa in macalinka reer Spain uuu booskiisa lumin karo.
Arsenal ayaa bilawgii kulamada xili ciyaareedka cusub ee Premier league waxay guuldaro kala kulmeen Liverpool halka ay barbaro la galeen kooxda Tottenham taas oo keentay in ay Gunners kaalinta shanaad ee kala saraynta Premier league ku jirto.
Taageerayaasha Arsenal ee doonaya in shaqada laga caydhiyo Unai Emery ayaa ku dooday in kooxdoodu ay u baahan tahay tababare da’yar ah oo hanaan ciyaareed oo fiican leh waxayna magacaabeen tababaraha kooxda RB Leipzig ee Julian Nagelsmann si la mid ah kabtankoodii Gunners ee Mikel Arteta oo hadda ka tirsan shaqaalaha tababarka Pep Guardiola ee Man City.
Tababaraha saddexaad ee ay taageerayaasha Arsenal magacaabeen ayaa ah macalinka kooxda Ajax ee Ten Hag laakiin waxay diideen soo jeedinta ah in Maxi Allegri uu badalo Emery iyaga oo ku dooday in Allegri aanu ahayn mid wax dhaama keeni kara Emery oo ay naceen hanaankiisa ciyaareed.
Taageerayaasha Arsenal ee sida wayn ugu kacsan Unai Emery ayaa ku dooday in Mikel Areta uu yahay mid hanaan ciyaareed oo fiican leh isla markaana waxay barbar dhigeen Pep Guardiola iyo Pochettino hanaankooda ciyaareed ee ay shaqada fiican ku soo qabteen.
Macalinka RB Leipzig ee Julian Nagelsmann oo ka mid ah tababarayaasha sida wayn loo qiimeeyo iyo Ten Hag oo Ajax wacdaro ka soo dhigay xili ciyaareedkii la so dhaafay isla markaana Champions League dib ugu soo celiyay ayay jamaahiirta Gunners doonayaan in ay badal u noqon karaan Emery.
Laakiin maamulka Arsenal ayaan ahayn kuwo u dhego nugul soo jeedinta ama cabashada jamaahiirta kooxdooda iyada oo la ogaa waqtigii dheeraa ee ay ku qaadatay in Arsene Wenger kooxda laga diray.
Si kastaba ha ahaatee, iyada oo afar kulan oo kaliya laga ciyaaray xili ciyaareedka Premier league ayay taageerayaasha Gunners qayb ka mid ahi quus ka joogaan Emery iyaga oo baraha bulshada ku soo bandhigaya dareenkooda.